I-Pisces Indoda kunye ne-Aquarius Woman Ukuhambelana okungapheliyo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-Pisces Indoda kunye ne-Aquarius Woman Ukuhambelana okungapheliyo
I-Pisces Indoda kunye ne-Aquarius Woman Ukuhambelana okungapheliyo
Indoda yePisces kunye ne-Aquarius yomfazi abanazo izinto ezininzi ezifanayo. Ngelixa indoda yePisces ingenisiwe kwaye inovakalelo, umfazi wase-Aquarius ukhutshiwe kwaye uyazimela. Nangona kunjalo banokuba nolwalamano olukhulu ukuba benza iinzame zokuqonda omnye komnye.
Iikhrayitheriya Isidanga sokuhambelana komfazi wasePisces Man Aquarius
Unxibelelwano Okomele kakhulu ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Ubudlelane bomfazi wasePisces u-Aquarius bunokuba bunzima, kwaye kwangaxeshanye bunomdla. Xa bekunye, aba babini banokusombulula ezona ngxaki zinzima. Uninzi luthi luyakwazi nokwenza imimangaliso.
Indoda yePisces ithambile kwaye inomoya kakhulu. Uya kusebenzisa i-intuition yakhe ukuqikelela ukuba le ntokazi ye-Aquarius engalindelekanga ifuna ntoni. Umphuphi we-zodiac, uhlala kwilizwe lakhe lamaphupha apho ahlala khona ixesha ngalinye ubomi buba nzima kakhulu.
Ukuqwalaselwa kwakhe kwiinkcukacha akunakulinganiswa neminye imiqondiso. Xa umfazi ka-Aquarius edibana naye okokuqala, uyakucinga ukuba uyothusa kwaye wahluke kakhulu kwamanye amadoda awakhe wadibana nawo ngaphambili.
Nangona kunjalo, le yinto eya kumqinisekisa ukuba abe nomhla wesibini nowesithathu kunye naye. Ukuthanda ukwazi akuyi kumvumela ukuba anikezele kuye ngokulula-ngumfazi ongaqhelekanga ngokwakhe.
Inyaniso yokuba bobabini bahlukile yinto yokuba umfazi we-Aquarius kunye nePisces bafana. Intuition yabo ibenza ukuba babe nokuqikelela kwiimvakalelo neengcinga zabantu.
Xa bethandana, ixesha elichithwe kunye liya kuba yinto emangalisayo kwaye lixabiseke kakhulu bobabini. Uya kumbonisa indlela yokuba neemvakalelo ngakumbi kwaye azi ngeemvakalelo zakhe, kwaye uya kumnceda ukuba ahlukane kwaye angakhathali.
umfazi we-taurus kunye nendoda eyi-aries
Xa kuziwa kwisini, ziyahambelana kakhulu. Abayi kuphinda babonakalise iminqweno yabo efihlakeleyo kunye neengcinga zabo ezimbi kakhulu baya kuqikelela nje ukuba omnye ufuna ntoni kwaye ufuna ntoni.
Indoda yasePisces iAquarius isibini esitshatileyo sesinye. Iya kuba ngumnqa into yokubona umfazi ophetheyo wamanzi waManzi ezinikele kwindoda enye. Ngaphezu kwayo nayiphi na enye into, ufuna iqabane lakhe ukuba lithembeke kwaye lizinikele kuye. Ukuba wayekhe waqhathwa okanye waqhathwa, wayeya kubandezeleka kakhulu.
Okukhona echitha ixesha elininzi nabahlobo bakhe, kokukhona eya kuziva ngathi akahoywanga. Kuya kufuneka onwabise okanye afumane into ayithandayo xa ephumile eyonwabile eyedwa. Ukuthandana phakathi kwabo wistful. Nangona enokuziva engakhuselekanga ngenxa yokuba ezimele kakhulu, baya kuzalisekiswa ezingalweni zomnye nomnye.
Njengaso nasiphi na esinye isibini, indoda yasePisces kunye nomfazi wase-Aquarius banokufana nokuhluka kwabo. Ngelixa ephaphazelayo kwaye ehlukanisiwe, uphupha ngobuhlobo bokwenyani, kwinto enokufikelelwa ngokulula nangubani na.
Ngokungafaniyo naye, akanakukhathazeka ukushiya iinjongo zakhe kunye nethemba lakhe ngasemva ukuze enze abanye bazive bonwabile.
Xa ecaphukile, indoda yePisces ayinakho ukuzola kwangoko, kufuneka ishiywe yodwa ukuze ipholile. Uya kuthi ekugqibeleni abuyele kwinto yakhe eyonwabileyo kwakhona, kodwa akabuyeli kuthe cwaka ngaphambi kokuba aveze iimvakalelo zakhe.
Umfazi wase-Aquarius akancami de abe uzibonakalisile ukuba ulungile. Ngelixa efuna ukukhululeka kwaye asuke kwenye indawo aye kwenye, indoda yasePisces ifuna ikhaya elicocekileyo kunye neqabane elithembekileyo lokugcina inkampani ubomi bayo bonke.
Zombini ziyabakhathaza intswelo yomnye nomnye yokusondela kodwa kwangaxeshanye banqwenela inkululeko. Ukuba banokungayihoyi into yokuba bahluke kakhulu, bangafunda ukuhlala kunye kwaye bonwabe njengabantu abatshatileyo. Okukhona beyiqonda into efunwa yenye, kokukhona unxibelelwano lwabo luya lusomelela.
Ngokukhawuleza ukuba indoda yePisces kunye ne-Aquarius ibhinqa bafumane ukuba ngabahlobo abakhulu, baya kuba bekulungele ukutshata. Ngokwasemphefumlweni, banxibelelene kakhulu, ngoko ke ayibobudlelwane obusekwe kubuhlobo kuphela.
Ufuna ukuba abe ngumhlobo wakhe osenyongweni ngaphambi kokuba abe sithandwa sakhe. Intlonipho nothando ziya kuba zezona zichaza umanyano lwabo. Uya kuwamamela ngomonde onke amaphupha akhe kwaye amxhase ekufezekiseni iinjongo zakhe. Ecaleni kwakhe, uya kuziva ngathi angenza nantoni na.
Umfazi wase-Aquarius akazibopheleli de aqiniseke ngeemvakalelo zeqabane lakhe. Kodwa nje ukuba enze isithembiso, unokuqiniseka ukuba uyakusigcina-indoda yePisces iyafana. Uya konwaba kuba uyamvumela ukuba akhululeke, kwaye ama-Aquarians afuna inkululeko ngaphezulu kwayo nayiphi na enye into.
Yonke into ayigqibayo iya kuthakazelelwa kwaye ihlonitshwe nguye. Njengoko enobuchule kunye nezinto ezintsha, unokulindela ukuba zonke izimvo zakhe zingahambelani kwaye zinomdla.
Uya kuba nomdla kuye kwakamsinya nje akuba engena ebomini bakhe. Baya kuwa madly uthando omnye komnye ukususela kumhla wabo wokuqala. Obu budlelwane buzele luthando lokwenene kunye nomtsalane omkhulu womzimba.
Indoda yomfazi wasePisces u-Aquarius iya kuhambelana, nto leyo ethetha ukuba iya kuhlala ixesha elide kwaye ichume yonke imihla. Ukuthandana nokuqonda kuya kuba yinto eqhelekileyo phakathi kwabo. Ngomnye wemitshato ephumelele kakhulu kwi-zodiac.
Baza kuhlala ixesha elide kunye, akunakulindeleka ukuba bafumane uqhawulo-mtshato emva kweminyaka embalwa kunye.
Ikhaya labo liyakwamkela kwaye nendawo apho abahlobo be-ir baya kumenywa ukuba bonwabe. Abayi kuze badikwe kunye kuba bobabini bayacinga.
Ukufana kwabo kuya kujongwa kuba bobabini banomdla wokubona okuphuma xa bedibanisa imikhosi. Kuya kufuneka abe nomonde kuba unovakalelo olugqithisileyo kwaye unokwenzakaliswa lulo naluphi na uluvo oluncinci olunobukrwada. Uthando lwabo omnye komnye alunamiqathango kwaye alunasiphelo.
Iingcebiso zokugqibela zePisces Man kunye ne-Aquarius Woman
Indoda yePisces ngumqondiso wamanzi onokutshintsha, kwaye umfazi wase-Aquarius ngumoya ozinzileyo. Banobuntu obahlukeneyo kunye neendlela zokuphila.
Unobuhlobo kwaye akaze avumele iimvakalelo ukuba ziphazamisane nobomi bakhe bemihla ngemihla, ngelixa ebonakala ngathi ulawula kuphela ngentliziyo yakhe kwaye akanangxaki nokuchitha ubusuku bakhe yedwa ekhaya.
Ukhululekile ngakumbi kwaye ukhululekile, njengeqabane lakhe. Ukuba bangachitha ixesha elininzi kunye, bebeya kufunda lukhulu omnye komnye. Kuyimfuneko ukuba angavali kwaye amvumele angene kwihlabathi lakhe langaphakathi.
Kwelinye icala, kufuneka aqonde ukuba kufuneka abenendawo kwaye azikhusele ngokweemvakalelo. Umonde ubalulekile kubudlelwane kunye nendoda yePisces. Ukuba uza kukhathalela umntu wasetyhini ngentliziyo yakhe yonke, kufuneka athandwe kakhulu. Nantoni na enovakalelo inokumphazamisa.
Ukuba akanako ukoneliseka ngokwasemzimbeni nasengqondweni, akasayi kuthandabuza ukufuna elinye iqabane. Kuya kuba kuhle ukuba akaxhomekekanga kumfazi wakhe wase-Aquarius. Ukuzimela ngokweemvakalelo yeyona ndlela ilungileyo yokuba le ndoda yonwabe.
Ukuba bafuna ukuba sisibini esihlala ixesha elide, aba babini kufuneka balibale konke malunga nokungafani kwabo kwaye babe ngcathu. Ngale ndlela kuphela, baya kuba nakho ukonwaba ebomini.
Ngelixa umfazi wase-Aquarius efuna ukunika umbono wokuba wazi yonke into, uya kuziva ngathi indoda yePisces ayinalo ulwazi olwaneleyo ngaye. Unomonde ngakumbi kunaye, ke uyaphumelela kweli sebe.
Kodwa uneengcinga ezintle kunye namaphupha amakhulu, ke unokufuna ukubeka into ehamba ngengqondo yakhe. Akayi kukhathalela ukuba abantu bacinga ntoni ngolwalamano lwabo, ngoko kuya kufuneka ajongane nale nto.
Umntu othandanayo kulo manyano yindoda ekhathalayo yePisces. Umfazi wase-Aquarius kuya kufuneka ngandlela thile afunde ukuba yinto encinci okanye uya kuqala ukuziva engaxabisekanga kwaye enqatshelwe.
Ama-Aquarians awanalo naluphi na uhlobo lokuthanda. Xa bebona abantu abanemvakalelo kwaye bezimisele ukufezekisa iphupha, bayacaphuka kwaye bangazoli.
Ukuhambelana komfazi wasePisces u-Aquarius kukhulu kwinqanaba leengqondo. Bobabini baya kuba nezibonelelo ezinkulu ngokubambisana. Uya kuzifumana kunye nemigaqo yakhe ngelixa evula kuye. Uya kuba ngumtsalane oya kumenza afune ukumkhathalela. Ngamnye kubo uya kufumana okuthile kolu lwalamano.
Umfazi wase-Aquarius othandweni: Ngaba uyalingana?
Abalingani bomphefumlo baka-Aquarius: Ngubani amaqabane abo woBomi bonke?
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye nePisces kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Umfazi we-Aquarius kunye nezinye iimpawu
Imercury kwiNdlu ye-8: Ibuchaphazela njani uBomi baKho noBuntu
Uphawu lweZodiac lwangoSeptemba 17
yintoni umqondiso weenkwenkwezi ngoDisemba 31
uphawu lwe zodiac lwangoDisemba 15
I-sagittarius eyindoda kunye ne-aries yabasetyhini
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha 26
uphawu lweenkwenkwezi ngomatshi 23
isayina umntu obathandayo uyakuthanda